I-International Road Transport-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>EzokuThutha Emgwaqweni Wezizwe>EzokuThutha Emgwaqweni Wezizwe
Ukusuka eChina kuya emazweni asendulo ase-Asia amazwe amahlanu （Kazakhstan 、 Kyrghyzstan 、 Uzbekistan 、 Tajikistan neTurkmenistan), ezweni lonke laseRussia, kuya eMongolia njll.
I-cargos engaphandle kwe-gauge, i-car log ye-logisitics ne-cargos esindayo.
Ngeminyaka yemizamo, abakwa-SHL baqoqe okuhlangenwe nakho okucebile futhi bakha ukubambisana okubanzi kwe-bussiness.
Idolobha / County
Okokuqala ngenisa ulwazi oluncane lwasemuva lokuhamba ngomgwaqo emhlabeni jikelele:
I-1.IRU yinhlangano yezokuhamba ngomgwaqo emhlabeni.
Bahola izixazululo ukusiza umhlaba uthuthuke kangcono, usekela ezohwebo, ukukhula komnotho, imisebenzi, ukuphepha, imvelo nemiphakathi. Umsebenzi we-IRU uthatha amazwe angaphezu kwe-100. Izinhlaka zethu ezibalulekile izinhlangano zezokuThutha zikazwelonke nabaqhubi bezokuhamba.
2.Uma kanjani umthetho wokulayisha ezokuhamba ngomgwaqo emhlabeni jikelele?
● Indlela ye-CMR ekhishwe inyunyana yezokuhamba ngomgwaqo yaphesheya.
● Umhlangano we-Convention jamaa au contrat de ezokuvakasha waphesheya kwezilwandle u-Marchandises par Route (ufushaniswa njenge-CMR) uqaphela umthwalo wempahla uqashelwa iningi lamazwe ase-Central Asia, European, ASEAN nakwamanye amazwe e-CIS. Kubandakanya imininingwane ye-cargos, umthumeli, umgqugquzeli, olingana nomthethosivivinyo wokulayisha.
3.Yikuphi indlela yokuhamba kwezokuhamba ngomgwaqo emhlabeni jikelele?
● Isebenzisa imvume ye-TIR imvume, leyo yiTrans International Router.
● Ngokwe-imithetho, lwenza izimpahla ukuba aliyise ovela ezweni lendabuko, emazweni zokuthutha, ezweni uya khona uphawu umthwalo linezingxenye ukuthi zilawulwa amasiko nge leyehlukehlukene uhlelo nekhululekile waqaphela esingenayo kuhlola, akekho emsebenzini noma akukho idiphozi ngesikhathi umphakathi. Kuyinto elula, ngendlela ephephile futhi enokwethenjelwa kakhulu ukuhambisa izimpahla eqele kwamanye amazwe amaningi, saving time imali yokugibela opharetha namasiko iziphathimandla.
4.When akazange China uqale ukusebenzisa emhlanganweni Tir?
I-TIR inamazwe angaphezu kuka-70 anenkontileka emhlabeni jikelele, futhi iyanda ngokushesha namanye amazwe angaphezu kwangama-20 abheke ukujoyina okuyizindawo ezibalulekile kulibhande lomnotho kasilika. Kepha iChina ayizange iwuqale ngokugcwele umhlangano kuze kube uJuni 25, 2019, osanda kuvula yonke imingcele eyi-1,200.Ukuba iChina iqale ukusebenza ngokusemthethweni emhlanganweni we-TIR ngoMeyi 2018, ezokuwela umgwaqo oledlule phakathi kweChina namazwe agudle u "One Belt And One". Umgwaqo "usufinyelele ekuphakameni okusha, waba yisiteshi sesine sempahla ukuncintisana nemashi eyikhona, umoya kanye nesitimela.